July Dream: Change...
Posted by JulyDream at 11:32 PM
အခု အလံအသစ်မှာပါတဲ့ အဝါရောင်က ဘာသာ၊ သာသနာနဲ့ ပညာတိုးတက်ခြင်း၊ အစိမ်းရောင်က စပါးဆန်ရေ၊ ကျွဲနွား အထွေထွေပေါများခြင်း၊ အနီရောင်က ရဲရင့်သော စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတဲ့။ အဖြူရောင်ကြယ်က ပြည်ထောင်စုကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ... သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တစ်နေရာမှာ အလံထဲက အရောင်သုံးရောင်ကို -လူတန်းစားသုံးမျိုးကို ကိုယ်စားပြုတယ်-ပြောထားလို့ ခွဲခြားခံရပါလား ဆိုပြီး အောင့်သက်သက် ဖြစ်သွားသေးတယ်။
နောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာ ပြောထားသလိုပဲ တွေးနေမိတယ် ကိုဂျူလိုင်၊ လူကြီးတွေအတွက် အရင်အလံကို ပြောင်းတာကြုံဖူးလို့ ဒီအလံကို သိပ်ခံစားရမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့လည်း တွေးမိတယ်။ အဲ.. နေ့အိပ်မက်တို့ မျိုးဆက်ကျတော့ ဘယ်သူပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ဖြစ် မွေးကတည်းက တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒီအလံကိုပဲ ချစ်နေတော့တာကိုး။ ဟုတ်တယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်သွားရင်တော့ ဒီနောက်ပိုင်းမွေးတဲ့ ကလေးတွေက ဒီအလံအသစ်ကို ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တောင် ကန့်ကွက်ကြဦးမယ်ထင်တယ်။
ဒီတစ်ခါ ရေးတာတော့ တော်တော် ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်း ရှိသား. ခြေခြေငံငံရှိတယ်။
အခြေခံ ဥပဒေ မဲပေးတုန်းက နာဂစ် ၀င်မွှေတယ်...
အခု အလံသစ် တင်တော့ ဂီရိ ၀င်မွှေတယ်...
ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခဲ့ရင် ???
အဝါရောင်က မျက်စိကျိန်း၊ အစိမ်းရောင်က စိမ်းကားရက်စက်၊ အနီရောင်က ပွက်ပွက်အန်.. အဲဒါ ငါတို့ အလံ... ( ပြောရရင် ရဲရဲတော် အရင်အလံကိုပဲ စိတ်ထဲ စွဲနေတယ်ဗျာ )
ခုမှ အရင်အလံပဲ ကြိုက်တာပြောလဲ ဘာထူးတော့မလဲနော် ..